ဉာဏ်ကောင်းသော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဉာဏ်ကောင်းသော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အထူးသဖြင့် သေးငယ်သော အလုံး & ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် damper auသို့matiပေါ်မှာ။AOX-R ကို ကို စီးရီး ဉာဏ်ကောင်းသော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuaသို့r များမှာ စိတ်ချရသော, ဘေးကင်းလုံခြုံ, အဆင်ပြေ နှင့် အခြား အားသာချက်များ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် လိုက်ဖက်မှု, applဖြစ်tability, ကျတှေ့ နှင့် ဒါကြောင့် ပေါ်မှာ။ AOX လိမ့်မည် ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ထုတ်ကုန် ဒါကြောင့်lidly နှင့် ဆက်လက် ကျွန်တော်တို့၏ efဘို့ts သို့ ဖန်တီး နောက်ထပ် အဘိုး ဘို့ cusသို့mers.
ထိန်းချုပ်ရေးmethodï¼ Intelligent အမျိုးအစား
2. က ISO 5211 mounting အခြေစိုက်စခန်း: ISO5211 / DIN3337 မှတစ်ခွင်, လွယ်ကူသော mounting အခြေစိုက်စခန်းစံ
3. ကောင်းပြီပိတျထားသော: အခွံနဲ့ဖုံးလျှပ်စစ် actuator ခွက်-ခုံးဖွဲ့စည်းပုံကိုဖွင့် AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ်လေးပုံတစ်ပုံ improveing ​​နှင့်ရေအထောက်အထား IP67 နှင့် IP68 (option ကို) ပေးဆီလီကွန်ရော်ဘာနှင့်အတူပိတျထားသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
4. ပြင်ပ Module module: AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ်လေးပုံတစ်ပုံလျှပ်စစ် actuator သည့်မော်ကျူး၏အာကာသကိုတိုးပှား turn က module ကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေနှင့်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ဝန်ဆောင်မှုဘဝရပါလိမ့်မယ်။
1997 ခုနှစ်မှစ. AOX ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ် actuator နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ်တော်မူသောအားထုတ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ထိုမှတပါး, လျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်, Email- zjaox09 ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျကြိုဆိုပါတယ်ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုကနေတဆင့်လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်တိုးရန်အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြနှင့် etc.If သင်တို့သည်ငါတို့၏အသိဉာဏ်သုံးလပတ်အတွင်းစိတ်ဝင်စား @ zjaox.com ။
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထက်မြက်လေးပုံတပုံသေချာလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်မှာတော့ကျနော်တို့မှာလည်းထိန်းချုပ်မှုများ၏အသေးစိတ်ကို, အထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးဖို့အာရုံစိုက်, ချောထုပ်ပိုးထိရောက်စွာဖောက်သည်ကောင်းတစ်ဦးအတှေ့အကွုံပေးရ, ထုတ်ကုန်များ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုသေချာနိုင်ပါတယ်။
Q: မဆိုအသိအမှတ်ပြုသွင်းကုန်၏မပါဘဲလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်သည့် AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ်လေးပုံတစ်ပုံအမိန့်ပေးနိုင်သနည်း
မေး: သင် AOX-R ကိုစီးရီးအသိဉာဏ်လေးပုံတစ်ပုံ၏စတော့ရှယ်ယာလျှပ်စစ် actuator turn ရှိပါသလား?
hot Tags:: ဉာဏ်ကောင်းသော လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator နှင့် torque ပွောငျးလဲ